Ciidanka Suudaan Ayaa Dib U Xidhay Maxaabiistii Siyaasadda 2 Maalmood Kadib Markii La Sii Daayay » Axadle Wararka Maanta
Ciidanka Suudaan ayaa dib u xidhay maxaabiistii siyaasadda 2 maalmood kadib markii la sii daayay
Guddoomiyaha Golaha Qaranimada Suudaan General Abdel Fattah al-Burhan.[Photo courtesy]KHARTOUM – Maamulka Suudaan ayaa dib u xiray todobo sarkaal oo hore wax yar uun kadib markii la sii daayay isla maalintaas iyagoo lagu eedeeyay dambiyo.
Xubin ka tirsan Golaha Sare Mohamed al-Faki, Wasiirka Warshadaha Ibraahim al-Sheikh, Guddiga Awood-siinta, Wajdi Saleh, Af-hayeenka FFC Gaafar Hassan, Xubin ka tirsan hoggaanka SPA Ismail al-Taj ayaa dib loo xiray ka dib markii la sii daayay Sabtidii.
Xubin ka tirsan kooxda difaacayay Iqbal Ali ayaa xaqiijiyay xarigooda, waxaana uu Axadii u sheegay Sudan Tribune in qareenada ay gudbiyeen codsi ah inay soo booqdaan maxaabiista.
Maamulka ayaa qareenada ku wargaliyay in ay u xiran yihiin qodobbada 58-aad iyo 62-aad ee xeerka ciqaabta ee la xiriira kicinta ciidamada caadiga ah ee gadoodsan, iyo kicinta qaska ee ciidamada caadiga ah.
Iqbal waxa uu tilmaamay in maxbuuska labada eedaymood lagu sii dayn karo damiin.
Sidoo kale, Xafiiska Xeer Ilaalinta ayaa ku wargaliyay Qareenada inay baaris ku bilaabeen qaar ka mid ah maxaabiista, ayna ka fiirsan doonaan sii deyntooda marka ay baaristu soo dhamaato.
Qareenka oo hadalkiisa sii wata ayaa intaa ku daray in mas’uuliyiintu ay caddeeyaan in dacwadaha aysan ahayn dhaqan xaasidnimo ah si loo kordhiyo muddada xabsiga ee afarta maxbuus ee ka soo horjeeday qeybta ciidamada.
Madaxa golaha sare Gen Abdel Fattah al-Burhan ayaa heshiis siyaasadeed la saxiixday ra’iisul wasaare Abdallah Hamdok oo ay ku jirto in si degdeg ah loo sii daayo maxaabiista siyaasadeed ee la xiray kadib afgambigii October 25.
Si kastaba ha ahaatee, al-Burhaan ayaa ka hadlay dambiyada lagu soo oogay qaarkood, isagoo aan tafaasiil ka bixinin isagoo intaas ku daray inay tahay inay marka hore cadaalad wajahaan.
Ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay xafiiska ra’iisul wasaaraha.
Xisbiga Kongareeska Suudaan ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in ay dowladda Suudaan mas’uul ka tahay nolosha iyo badqabka xisbiga uu hoggaamiyo Al-Sheikh iyo maxaabiista kale ee la xiray.
Xubin ka tirsan Guddiga Sharciga ee Ciidamada Xoriyadda iyo Isbeddelka Muez Hadrat ayaa u sheegay TV-ga Al-jazeera Axadii shalay in ciidamada Sudan ay dacwado ka dhan ah 25 hogaamiye oo ka tirsan Isbaheysiga u gudbiyeen isla markiiba ka dib markii xabsiga laga sii daayay, oo ay ku jiraan qaar ka mid ah wasiiradii Xukuumaddii la riday. .
Si kastaba ha ahaatee, maamulka ayaan wax war ah ka soo saarin tirada dadka la xiray kadib afgambiga. Qaar ka mid ah dadka u ololeeya afgambiga ayaa sheegaya in ay jiraan in ka badan boqol oo tilmaamaya xubnaha guddiyada iska caabinta ee la xiray.
(This story #Ciidanka Suudaan ayaa dib u xidhay maxaabiistii siyaasadda 2 maalmood kadib markii la sii daayay. Has not been edited by Axadle Staff and has been auto-generated from the Syndicate feed.) while we endeavor to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information or related graphics contained on the post for any purpose.